Nandray marary an-jatony ireo miaramila mpitsabo etsy Mahamasina • AoRaha
Nandray marary an-jatony ireo miaramila mpitsabo etsy Mahamasina
Marary manodidina ny dimampolo amby zato no noraisin’ireo mpitsabo tetsy amin’ ny Ivon-toerana fitsaboana ny valanaretina Covid-19 na CTC, tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, tao anatin’ny roa andro nanokafana an’ity toerana vaovao fandraisana sy fitsaboana marary ity, nanomboka tamin’ny alatsinainy teo.
Marary mitady toromarika noho ny ahiahy amin’ny fitondrana ny tsimok’aretin’ny Covid-19 ny ankamaroan’izy ireo. Misy ireo omena fanafody sy toromarika mialoha ny hodiany. « Marary roapolo, hatreto, no manaraka fitsaboana eto. Manana fahasoratana amin’ireo soritr’aretina mahery ny ankamaroan’izy ireo », hoy ny kolonely Ratovondrainy Willy, tompon’andraikitra voalohany eny amin’ny CTC Mahamasina, omaly, tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana.
Andraikitra maro no sahanin’ny CTC, toy ny fandraisana an’ireo antso maika an’ arivony avy amin’ireo olona mila fanampiana sy torohevitra amin’ny valanaretina Covid-19.
Voalaza fa manana olana amin’ny momba ny fitaovana feno hampiasaina hikarakarana sy hanaraha-maso an’ireo marary ity ivon-toerampitsaboana tantanan’ny miaramila etsy Mahamasina ity. Isan’izany, ohatra, ireny akanjo fiarovan-tena amin’ny tsimok’aretina na Epi ireny.
Miezaka manao izay ho afany sy mivonona hatrany amin’ny fandraisana marary hatramin’ny dimampolo sy roanjato kosa anefa ireo mpitsabo. Efa voalamina tanteraka koa ireo efitrano fandraisana ny marary.
Fizarana fanampiana Mampitandrina an’ireo mpanakorontana ny Zandarimariam-pirenena
Fizarana sosialim-bahoaka eto Iarivo Arahin’ny kaominina maso akaiky ireo sefo fokontany
Kolontsaina Koreana – K-POP :: Hahazo loka avokoa ireo mpandray anjara rehetra
Fitsaboana ny covid-19 :: Mitady mpitsabo sy mpitsabo mpanampy 324 ny fanjakana